Ukuphupha ngeAal Discover ➡ Discover kwi-Intanethi ▷ ➡️
I-eel (lat. De anguis = inyoka) sisilwanyana sasemanzini esifana nenyoka esaziwa ngokuba "yinyoka yamanzi" kwaye sizalelwa emanzini aseYurophu, eMelika naseAsia. Kodwa akuqhelekanga kuthi ukufumana iintlanzi kwilizwe lethu lamaphupha.
Ukuba ubona i-eel enye okanye ii-eel ezininzi ephupheni, inokuba neentsingiselo ezahlukeneyo. Isimboli yephupha "i-eel" itolikwa ngokomxholo kwaye ithathela ingqalelo, umzekelo, uhlobo lwamanzi kunye nengqondo yephupha apho kuvela khona intlanzi. Oku kuya kwenza ukuba iphupha kunye nokutolika kwalo kucace. Unokufunda ngakumbi malunga "ne-eel" isimboli yamaphupha engezantsi.
1 Uphawu lwephupha «i-eel» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «i-eel» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «i-eel» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «i-eel» - ukutolikwa ngokubanzi
Wakhe wadibana ne-eel okanye inyoka ephupheni? Ukufumanisa intsingiselo yala maphupha, iphupha elo kufuneka likhumbule ngakumbi ngeenkcukacha zephupha elo. Ukuba i-eel yayifana nenyoka kune-fish-shaped, gcina amehlo akho ehlanjululwe kubantu abathandekayo abakujikelezile. Usebenza "ngokutyibilikayo" kwaye aqhubeke nobomi engakhathaleli abanye abantu okanye ilahleko.
Ukongeza, umgangatho wamanzi ugqibe kwelokuba ubone i-eel okanye ii-eel ezininzi ephupheni. Ngaba amanzi acacile kwaye acacile? Kwaye sasithini isimo sakho sengqondo kunye nemvakalelo malunga nesilwanyana?
Ukuba ubona i-eel yamanzi amatsha ihamba emanzini acacileyo nacacileyo kwaye ukuba unemvakalelo elungileyo, oku kukwabonisa ukuhamba okuzayo okuza kufezekiswa ebomini bakho. Zama iinyani kwaye ubhetyebhetye Ulungelelwaniso batshintshe ubomi babo ngendlela elungileyo. Ukuba unemikhwa engathandekiyo, zama ukuyilahla ngoku.
Kodwa ukuba uneeel kwindawo ezinodaka kwaye zinzima-Uzibone ngokucacileyo ukuba amanzi ajikeleza nzima, emva koko umntu uziva enomnqweno wokuzifumana ekwimeko embi Iimbambano y ingxaki ukuxhasa Ukubona ii-eels ezininzi kunye ephupheni kubonisa a Inkanuko emva kwamava ezesondo. I-eel luphawu lwelungu lendoda, ngakumbi abasetyhini.
Apha ngezantsi, unokufunda malunga neentsingiselo ezongezelelweyo zesimboli yephupha "i-eel" ngokuchazwa kwephupha ngokubanzi:
I-eel iyaphuma esandleni sakho: ishishini eliyingenelo liphuma esandleni sakho okanye uloyiko lokwenza impazamo kubomi bakho bothando
Ukutya i-Eel: Lumkela iingxaki zeentlanzi ezingalunganga
I-eel iyabanjwa: bonisa unyamezelo. Ekugqibeleni kukho impumelelo
umgibe we-eel-kuya kufuneka uthathe indlela ethembekileyo kwaye uhlale kude nokungavumelekanga
U-Eel ubonile efile: Ukubandezeleka kunye nelishwa kusendleleni okanye uloyiso lwakho kwiintshaba.
Uphawu lwephupha «i-eel» - ukutolikwa kwengqondo
Ukuba iphupha libona i-eel okanye ii-eel ezininzi ephupheni, eli phupha kufuneka lihlale libonwa ngokomxholo. Ukuba amanzi mahle kwaye acacile kwaye iphupha liziva limnandi, nalo liyakhanya. imo yengqondo vumelanani.
Iphupha lide laziva kwelinye Umoya wethembaukutshintsha izinto ebomini zibe ngcono, "uhlambulule" ngobomi bakho kwaye kunokwenzeka ukuba iminqweno yesini ukwenza umdlalo. Ngokukodwa kwabasetyhini, i-eel emaphupheni ikwangumfuziselo welungu lendoda.
Uphawu lwephupha «i-eel» - ukutolika kokomoya
Ayisiyiyo i-eel kuphela, kodwa neentlanzi luphawu lokomoya kubuKristu. Intlanzi imele Hambisa, Kananjalo kwaye ngakumbi intshukumo yengqondo neyokomoya.